လွှတ်တော်အတွင်းမှာ အင်အား အသာစီးရရှိမှု အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒီမိုကရေစီ ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျ? - Yangon Media Group
လွှတ်တော်အတွင်းမှာ အင်အား အသာစီးရရှိမှု အပေါ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒီမိုကရေစီ ဗိုလ်ကျ အနိုင်ကျ?
နေပြည်တော်၊ မတ် ၁၅
လွှတ် တော်အတွင်းမှာ အင်အားအသာ စီးရရှိမှုအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒီမိုကရေစီဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့် ခံရသလို ဖြစ်နေကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးပိုက်ထွေးက ပြောကြားခဲ့သည်။ မတ် ၁၅ရက် မွန်းလွဲပိုင်း(၂)နာရီခန့် နေပြည်တော်၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုး ရေးပါတီဗဟိုဌာနရုံး၌ ကျင်းပခဲ့သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ကျွန် တော်တို့ နိုင်ငံရေးပါတီက နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသား အကျိုးမေးခွန်းတွေ မေးမြန်းတယ်။ အဆိုတွေတင်သွင်းတယ်။ အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ကန့်သတ်မှုတွေရှိတယ်။ အတိုက်အခံပါတီတွေက အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်း စေမယ့် ဆောင်ရွက်ချက်တွေ နောက် တကယ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ အဆိုတွေ လွှတ်တော်တွင်း အင်အားအသာစီးရရှိမှုအပေါ်မှာ အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှ မဲခွဲဆုံး ဖြတ်မှုနဲ့တားဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကနေ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့ ဒီမို ကရေစီ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်ခံရသလို ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါတွေကို ပြန်သုံးသပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ ပြည် သူတွေက ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လွှတ်တော်က ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ ပါတီစွဲ၊ အတ္တစွဲတွေနဲ့ ဒီကနေ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုနေပြီလား။ ဒီလိုမေးစရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ဘာမှဆောင်ရွက်လို့မရဘူး။လွှတ်တော်ကိုလည်း အားကိုးလို့ မရတော့ဘူး။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေက နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု ချင်းစီအရသော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ စုပေါင်းပြီးတော့ ပူးတွဲသဘောထား ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်၍သော်လည်းကောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကို အပြုသဘော ဆောင်ပြီးတော့ အကြံပြုချက်တွေ ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့ ဝေဖန်ထောက် ပြမှုတွေကို မသိကျိုးကျွန်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာ၊ စီးပွားရေး ကျဆင်းနေမှု၊ အခြေခံလူတန်းစားတွေ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်နေမှု၊ ရာဇဝတ်မှုတွေများပြားလာမှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေးပျက်ယွင်းလာမှုနဲ့၊ တိုင်းရင်း သားမဟုတ်တဲ့ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာ ခြားတွေဝင်ရောက် ခြေရှုတ်လာမှု တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးမှုလေး တောင်ခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးပိုက်ထွေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
”၂ဝ၁၇ ဧပြီ ၁ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီးတော့မှ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ NLD ပါတီက တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ချို့ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၊ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများမှာ အသုံးပြု ဖော်ပြသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးပါတီများကနေပြီး ပူးတွဲသဘောထား ထုတ် ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည် ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကိုလည်း ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့ တိကျတဲ့ အဖြေမရခဲ့ပါဘူး။ ဒါက သမိုင်းပါပဲ။ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ လက်ထက်တုန်းက နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမရှိ သင့်ဘူး။ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမရှိသင့်ဘူးလို့ တစာစာပြောခဲ့တဲ့ သူတွေက ဒီကနေ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ပါတီပိုင်မီဒီယာကဲ့သို့ အသုံးချနေခြင်း၊ ပြည်သူလူထုအသိပေးသင့်အသိ ပေးထိုက်တဲ့ သတင်းတွေကို မှန်ကန်စွာ၊ ရိုးသားစွာ ဖော်ပြမှုမရှိဘဲနဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစာ၊ မြန်မာသတင်းစာများမှာ အင်္ဂလိပ်သတင်းစာမှာ ရေးတော့တစ်မျိုး၊ ဘာသာ ပြန်မှာတစ်မျိုးနဲ့ ဒီလိုရေးသား ဖော်ပြ ဖြန့်ချိနေတာဟာ တော် တော်ရင်လေးဖွယ်ကောင်းတယ်။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ ပြည်သူနဲ့အတူလို့ ပြောနေသောအစိုးရသည် ဒီကနေ့ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေပြီလဲ လို့ ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာများက ထောက် ပြဖို့၊ ဝေဖန်ဖို့ကောင်းနေပြီလို့ ကျွန် တော်ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေ ပြင်ဆင်မှုအပေါ် သဘောထားကို သတင်းထောက်များဘက်မှ မေး မြန်းရာတွင် ဦးလှသိန်း၊ ပါတီဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီက”ငြိမ်းစုစီသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေရှိတယ်။ မိမိယုံကြည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ တင် ပြနိုင်တယ်။ လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်း ချမ်းစွာစုဝေးတန်းစီခွင့်ရှိတယ်တို့၊ အသင်းအဖွဲ့(သို့)အစည်းအ ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိ တယ်တို့။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး တိုင်းရင်းသား တစ်ခုချင်းသော်လည်းကောင်း ဘာ သာခြား တစ်ခုသော်လည်းကောင်း ချစ်ခင်မြတ်နိုးပြီး သာသနာ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို လိုက်နာရမယ်ဆိုတာ လေးရှိပါတယ်။ ဒီအခွင့်အရေး တွေအားလုံးကို ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဒလပြည်သူများ ရေသန့်စက်မှ တစ်ဆင့် ရေချို စတင်သုံးစွဲနိုင်ပြီ၊ ခြောက်လအတွင်း ပိုက်လိုင်းဖြ??
လက်ရှိ အစိုးရကို ပြည်သူများ ရွေးချယ်ထား၊ အစိုးရကိုဆန့်ကျင်လျှင် ပြည်သူကို ဆန့်ကျင်သည်နှင်
အစားထိုးမြေဧက ၁၉ဝဝ ကို ဝေးလံသည့် နေရာတွင် ဖော်ပေးသဖြင့် လက်ပံတောင်း မြေသိမ်းခံ တောင်သူများ
သတင်းအချက်အလက် ရရှိပိုင်ခွင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ပြန်ကြားရေး ဒုတိယဝန်ြ
နှစ်ပေါင်း ၁၃ဝ ကြာပြီးနောက် မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးအား ပထမဆုံးအကြိမ် ဗုဒ္ဓဘိသေက အနေကဇ??
သမီးလေးနဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးကျူးမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ မင်းသမီး ရီဆီဝှစ်သာစပွ?